Osisi na-enwekarị ntụ oyi n'ihi mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Osisi na-enwekarị ntu oyi n'ihi mgbanwe ihu igwe
Youchọpụtala n'ezie na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, e nwere osisi, dị ka osisi almọnd, na-ama ifuru tupu oge ha. Nke a, nke nwere ike ịbụ ihe ngosi magburu onwe ya, o nwere ike ibutere ha nnukwu nsogbu mgbe ntu oyi na-akụ, maka otu ihe kpatara ya na mkpụrụ ndụ ndị na-etolite petals anaghị anagide okpomọkụ dị ala. Ma ọ bụrụ na enweghị okooko osisi, enweghị ike inwe mkpụrụ osisi.
Mgbanwe ihu igwe na-eweta mmiri n'ihu, mana ọ bụ isi iyi nwere njirimara nke oge oyi, ya bụ: otu izu temometa nwere ike gụọ ogo Celsius iri abụọ, mana otu ụbọchị, ọ na-agbadata na ogo ise ma ọ bụ isii dara oke nke na-egbu ọnụọgụ karịa dị nro. Yabụ, nkpuru nke osisi di n'ihe ize ndụ.
Dị ka otu nnyocha e bipụtara na magazin Nature Communications, osisi ndị dị na Europe ruo afọ 30 maliteghachiri oge uto ha ụbọchị atọ gara aga wee kwụsị n'oge oyi. Mgbanwe a na-ekpughe ha mmiri frosts, nke bụ mgbe okooko osisi na epupụta oge ntoju. Ya mere, mgbe oyi na-ada, ma hapụzịa snowfall, ha na-adị oke ike, nke mere na okooko osisi na-ete ime ma epupụta na-ere ọkụ, ma ọ bụ daa ozugbo, nke a na-amanye osisi ahụ itinye ume ọzọ iji mepụta nke ọhụrụ.
Osisi almọnd si n'ubi m. Foto e mere na Jenụwarị 20, 2018. Ọ maliterela ịgba n’abalị asatọ n’ọnwa ahụ.
Kama, ke Asia ye North America ibat usen usen emi eto esibọde osụhọde, ma ọ bụghị n'ihi na ebe ndị ahụ na-ajụ oyi mana n'ihi na okpomoku zuru uwa belatara ubochi otutu afo na ntu oyi na eme. N'agbanyeghị nke ahụ, enweela oge ebe mmalite oge opupu ihe ubi a nwere mmetụta na-adịghị mma: na 2007 enwere izu izu nke mmiri ntu oyi na etiti na ọwụwa anyanwụ United States nke belata ọka wit site na 19%, nke piich 75% na apụl na walnuts. 66%.
Maka ozi ndị ọzọ, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Osisi na-enwekarị ntu oyi n'ihi mgbanwe ihu igwe